Ingxoxo ye-CET's Innovation - Isikhungo se-EcoTechnology
Njalo ngonyaka, iCentre for EcoTechnology (CET) ibeka imigomo yokuvelela yokuguqula indlela esiphila ngayo nesisebenza ngayo; nokwenza ngcono umphakathi wethu, umnotho, nemvelo. Sinyakazisa inaliti ngemizamo emisha yokushayela indiza, kufaka phakathi amaphrojekthi wokunciphisa amakhabhoni wendawo, ukukhipha amakhabhoni, ukunciphisa umthwalo omkhulu, ukwakhiwa kabusha nokuningi!
Ngo-2020, i-CET yehlisa ukukhishwa okulingana nokuthatha izimoto ezingama-35,000 emgwaqeni unyaka wonke, yonga amandla anele amandla emakhaya angaphezu kwama-7,500 6,000 unyaka, futhi yehlisa imfucuza eyanele ukugcwalisa izilahla eziyizi-14,000,000. Lo mthelela udale imali engaphezulu kwama- $ 45 ekulondolozeni impilo yabahlali nabaninimabhizinisi. Sizibophezele ekutholeni nasekusebenziseni izixazululo ezintsha zokusiza abantu namabhizinisi ukuthi bonge ugesi futhi banciphise imfucuza iminyaka engaphezu kwengu-XNUMX futhi sinomsebenzi omningi omuhle ohlelelwe ikusasa.
Ukubungaza iminyaka engama-51 yoSuku Lomhlaba, sihlale phansi noMqondisi Wezobuchwepheshe kwa-CET, u-Ashley Muspratt, nomunye wochwepheshe bethu bezeMvelo, uKaren Franczyk. Sixoxe ngokubaluleka kokuxazululwa kwezixazululo zokudla, ukuhlukaniswa ngamakhemikhali, ukusebenza kahle kwamandla, nokunye. Ingxoxo ibigxile emsebenzini onamandla ohlelwe yi-CET ngekusasa kanye namaphrojekthi athile amnandi akamuva. Uma ukuphuthele hlola okuqoshiwe ngezansi.
I-CET iyasiza abantu futhi amabhizinisi yonga amandla futhi wehlise imfucuza. Okwethu Isakhiwo Esiphezulu Sokusebenza Ithimba lisebenza ukusiza ekwakheni nasekuklanyeni ochwepheshe ukuklama nokwakha amakhaya nezakhiwo zemikhaya eminingi. Xhumana nathi ku-413-586-7350 noma welule isandla lapha.
Ufuna ukuqhubeka nokunciphisa umthelela wakho? Thenga izinto zokwakha ezibuyisiwe ku Izidingo ze-EcoBuilding, isitolo sezinto zokwakha esikhulu kunazo zonke esenziwe kabusha futhi esisele eNew England. Abakwa-EcoBuilding Bargains bamukela iminikelo yezinhlobonhlobo zezinto zokwakha izindlu ezisezingeni eliphakeme futhi bazithengisele umphakathi ngesaphulelo. Lokhu kuphambukisa imfucuza kusuka ezindaweni zokulahla komhlaba futhi kunikeza izinto eziningi ezinhle impilo yesibili.
Ufuna ukwenza okuningi ukugubha uSuku Lomhlaba? Funda eyethu Izindlela Ezi-10 Zokugubha Usuku Lomhlaba blog ukuze ufunde kabanzi ngezindlela ongaqina ngazo nsuku zonke! Buka ividiyo yethu ye-2020 Mission Impact engezansi ukuze ufunde konke ngomsebenzi owenziwe yi-CET ngonyaka odlule.